အသက်၃၅ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ အေးမြတ်သူ - Cele Gabar
ပါးချိုင့်မင်းသမီးလေးလို့ နာမည်ကြီးပြီး အေးချမ်းတဲ့ အလှပိုင်ရှင် မင်းသမီးအေးမြတ်သူကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အရွယ်နဲ့မလိုက်လော်ကအောင် နုပျိုနေတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်လို့တောင်ဆိုရမှာပါ ။
ဒီနေ့မှာတော့ မမြတ်လေးက အသက်၃၅ အရွယ် အမျိုးသမီးတွေလည်း တခါတရံ ဒီလိုလေးလန်းခွင့်ရတယ် ဟုတ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါအပြင် အသက်ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်း တခု ဆိုရင် အရွယ် ကတော့ လက်ရှိဖြစ်တည်အနေအထား ပါ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်စိတ်ကို မလျော့လိုက်နဲ့ ဘယ်အသက်အရွယ် မှ ရောက်နေ ရှိနေ စိတ်ချမ်းသာခြင်း က မင်းနှလုံးသားထဲမှာသာရှိတယ်ဆို အသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် မင်းရုန်းကန်နေရဦးမှာ
အဲ့အတွက် လက်ရှိအနေအထားကို အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပါ လို့ သူမရဲ့ ခံယူချက်လေးကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ် ။
မမြတ်လေး က သူမကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲ့လိုအားပေးရင်း ဘဝကိုကြိုးစားပြီးလျှောက်နေပါတယ်လို့ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ် ။ မမြတ်လေးရဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သူမရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ခံယူချက်လေးကို အတုယူနိုင်စေဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Posted in Cele NewsTagged Aye Myat Thu, Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post ပထမဆုံးဦးအနေနဲ့ ????? ???????? ???? လေးတစ်ခု ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အိချောပို
Next post ဘဝမှာအပျော်ရွှင်ရဆုံးမွေးနေ့ပွဲလေး ကို ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်း